Paula Ramos. Udliwano-ndlebe nombhali weNcwadi yeeNtsuku eziBomvu | Uncwadi lweNdaba
Ukufota: Iwebhusayithi kaPaula Ramos, ngu @jeosmphoto.
Umbhali waseMadrid UPaula Ramos ukhuphe incwadi entsha kulo nyaka esele iphela. Isihloko, Incwadi yeentsuku ezibomvu. Kule udliwano ndlebe Usixelela ngayo nangeminye imixholo emininzi. Ndiyabulela kakhulu ngexesha nobubele ondinike bona.
Uthweswe isidanga kwi UbuGcisa obuhle kunye noYilo, ikwazi ukudibanisa ezi zinto zimbini ezithandwayo kunye noncwadi. Wazipapasha ngokwakhe ibali lakhe lokuqala, Iindlela ezinqumlayo, ngo-2013, yaye ukususela ngoko uye waqhubeka ebhala. Udlale inoveli yolutsha ezothando ngebhayoloji ye Epreli (Isayinwe, ngoAprili y Iileta zika-Aprili) kunye nayo kumnandi nge Izikumkani ezine y Imimandla Elityelweyo. Kunye Pinkies amantombazana, ukuphononongwa kwakhona kunye nokugubha kwimbali yeGrease, ithatha uhlobo lolutsha kunye nolothando. Mandulo Umboniso weNcwadi waseMadrid Ndangqina ukuba yenye ye ababhali abaninzi abadumileyo kwaye abalandeli abaninzi bahlanganisana kwiisignesha zabo.
UNCWADI LWENGOKU: Isihloko senoveli yakho yamva nje sithi Incwadi yeentsuku ezibomvu. Usixelela ntoni ngayo kwaye yavela phi le mbono?
PAULA RAMOS: Ngaphakathi Incwadi yeentsuku ezibomvu uya kudibana Elsa, amashumi amathathu anento engahambi ngomsebenzi wakhe obalaseleyo okanye ixesha lobuqu. Umbono weza ngokusisiseko ngokufuna ukuxelela loo nto mzuzu kubomi bakhe wonke umntu ovakalelwa kukuba awufikeleli kulindelo ukuba udlise ubomi.
Kule ncwadi yokuqala, kuba i trilogyNgokukhethekileyo siza kudibana noElsa, othi kwiholide yakhe yeKrisimesi agqibe kwelokuba abuyele kwidolophu akhulele kuyo ukuze achithe iiholide nentsapho yakhe, yaye nangona wayejonge ukuba neholide ezolileyo, kwahluke ngokupheleleyo koko. Ukuhleka okuqinisekisiweyo, ibali lothando elomelezayo kunye neqela elikhulu labahlobo.
PR: Ukufunda ndikufunde ubomi bam bonke, nangona ndandingazi, usapho lwam lundicacisele ukuba ndawathatha amabali ndawabalisa, ndisenza ngathi ndiyawafunda. Eyokuqala endayibhalayo, xa ndandineminyaka elishumi elinesibini ubudala, yayiyileyo Cassandra, intombazana ibali layo kwabelwana ngako baninzi ukufana kunye noHarry Potter, Hahaha.
AL: Ngubani lo mbhali oyintloko?Ungakhetha ngaphezu kwesinye kwaye ngamaxesha onke.
PR: UJennifer L. Armentrout Ayisoze indilahlekele, into entsha ephumayo, ndikhona nepotifoliyo yam, kodwa ndiyabathanda ababhali abaninzi, uLaura Gallego, uJK. Rowling, UKen Ifollet, uMichael ekupheleni… Uluhlu alunasiphelo.
PR: Ngaphandle kothandabuza Harry Potter.
PR: Ukuba kwindawo yam yokubhala, kuphela, kunye neencwadana zam, zam umculo, ndize ndiqukuqele.
PR: Umzuzu endiwuthandayo ngezo ntsuku xa yonke into ihamba kakhulu, kodwa ngokubhala kufuneka usebenze yonke imihla.
PR: Uhlobo endiluthandayo lu umbono, endiyibhalileyo nam, kodwa Ndifunde yonke into: amapolisa, ezothando, ezembali ...
PR: Ukufunda Uzuko nomsindo nguJennifer L Armentrout, kunye nokubhala, eyesithathu yetrilogy: Iingcebiso ngeentsuku eziluhlaza.
PR: Ewe, kubonakala kum baphile ngakumbi kunanini na ngaphambili. Igcwele iindaba, zababhali abatsha, lihlabathi ekukhuleni rhoqo kunye nokufumanisa. Ndizamile ukupapasha ukuze afundeke amabali am, ekugqibeleni yindlela yokusondela kubafundi bakho ukuze uwapapashe ngokwesintu.
PR: Ndicinga ukuba kufuneka njalo fumana izinto ezilungileyo yezinto.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Udliwano-ndlebe » Paula Ramos. Udliwano-ndlebe nombhali weNcwadi yeeNtsuku eziBomvu